IiSandals Resorts eBarbados: zivuliwe kwaye zamkela iindwendwe
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zeBarbados zokuhamba » IiSandals Resorts eBarbados: zivuliwe kwaye zamkela iindwendwe
IiSandals Resorts eBarbados
Yiloo nto uSandals Resorts uSihlalo weSigqeba saMazwe ngaMazwe u-Adam Stewart ayibiza ngokuba ngumhla ophawuleka xa iihotele zabo ezimbini zaseBarbados zivulwa kwinyanga ephelileyo, eyokugqibela ukwenza oko ukusukela oko ubhubhane wafika kunyaka ophelileyo.
Ngomhla we-14 kuMeyi, ngo-2021, bobabini iiSandals iBarbados kunye neembadada zasebukhosini zeBarbados bavule iiflegi zabo ukubonisa ukuvulwa kwakhona.
Ngaphandle kweSandals Royal Bahamian okwangoku ephantsi kokuhlaziywa, zonke iiholide zeSandals ngoku zivulekile kwaye zamkela iindwendwe.
Iimbadada zikhokelele kwimizamo yokuvula kwakhona kwiCaribbean kunye nokuseta imigangatho yendlela yokukhusela kunye nokuphumelela ukwamkela abahambi babuye.
"Namhlanje lusuku olubalulekileyo kwiSandals Resorts International, ephawula okokuqala ukusukela oko kwaqala lo bhubhani, ukuba sisebenza kuyo yonke indawo esiya kuyo eCaribbean," utshilo uStewart. "Obu bubungqina kwiqela lethu elimangalisayo, iindwendwe zethu ezinyanisekileyo kunye nabacebisi ngezohambo abathemba iimveliso zethu ukuba zizalisekise izithembiso zethu zokubeka impilo nokhuseleko lwabathengi babo phambili."
bonke Iimbadada zeembadada, Ngaphandle kweSandals Royal Bahamian, eqhubeka notshintsho olubanzi kwaye iya kuvulwa kwakhona ngo-Novemba 4, ivulekile ngokupheleleyo kwaye iyasebenza. Zonke iindawo ekuchithelwa kuzo iilwandle ezintathu, ezinendawo eJamaica naseTurks naseCaicos, nazo zivulekile.
“Siyavuya ukubuyela emsebenzini kuyo yonke indawo esisebenza kuyo kwiCaribbean. Kwaye nangona kuluvuyo ukwamkela iindwendwe kunye nokwanelisa iimfuno zokungena kwisitayile sethu sokunethezeka kubandakanya iholide, kuyonwabisa kakhulu ukwazi ukuba siyinxalenye yenjini yokhenketho eya kuzisa ithuba lokwenyani nelinentsingiselo kumalungu eqela lethu kunye noluntu olukhulu lweCaribbean. Siyazingca ngokukhokela iinzame zokuvula kwakhona kwiCaribbean kwaye sibeke umgangatho wokuba singabamkela njani ngokukhuselekileyo nangokuphumelelayo abahambi ababuyayo. Olu lusuku oluhle kwaye sisiqalo nje, utshilo uStewart.
IBarbados likhaya leendawo ezingaqhelekanga, imbali etyebileyo, kunye neendidi ezahlukeneyo zemidlalo kunye nemisebenzi. Ngomhlaba omangalisayo otshintsha kakhulu ukusuka kwenye idolophu ukuya kwenye, indawo nganye inesantya esilinganayo, inika imisebenzi kunye nokuzonwabisa kubathandi bendalo, abahamba iklabhu kunye nabahambi ngokufanayo. Le gem ingaqhelekanga ityhila imiqolomba enzulu kunye namahlathi anenkawu ngokuchasene nokuma kwamawa, ulwandle olunentlabathi emhlophe kunye nolwandle oluqaqambileyo. IBarbados ibonelela ngeendawo zokutyela zabantu abadala ezi-2 ezibandakanyiweyo, kubandakanya iiSandals zokuqala echibini eliseluphahleni, igadi yokuqala yobugcisa, kunye nokutya okumnandi kwiindawo zokutyela ezili-18.
Ukongeza kwiiholide ezi-2 eBarbados, iindwendwe zamkelekile kwiiBahamas e-Emerald Bay; IJamaica eMontego Bay, eRoyal Caribbean, eNigril, kuNxweme oluseMazantsi, eOchi, naseRoyal Plantation; Antigua eGrande Antigua; INgcwele yaseLucia eRegency La Toc, eGrande St. Lucia, naseHalcyon Beach; kunye neGrenada eSt. George's, eGrenada.
Iindaba ezingakumbi malunga neembadada
Ezokhenketho zaseTropical North Queensland zithiya ilungu elitsha lebhodi
IAlgeria ivule kwakhona uhambo lokuhamba ngenqwelomoya kumazwe eFrance, eTurkey, eSpain naseTunisia
Iinkawu ezinkulu zaseAfrika zisengozini yokuphulukana neendawo zazo zokuhlala
Iindaba zokuhamba eGrisi
45 imiz edlule